टमाटर, काकडी तरकारी आपूर्तिकर्ता र निर्माता - चीन कारखाना - Jianda को लागि Ducth बाल्टिन सब्सट्रेट हाइड्रोपोनिक्स
घर > उत्पादनहरू > हाइड्रोपोनिक्स > सब्सट्रेट हाइड्रोपोनिक्स > टमाटर, काकडी तरकारीका लागि डकेट बाल्टी सबस्ट्रेट हाइड्रोपोनिक्स
नेदरल्यान्ड बाल्टिन (बाटो बालकेट पनि भनिन्छ) एक कुशल ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो र ठूलो, दीर्घकालिक बालीहरू जस्तै बेल टमाटर, खुर्सानी (क्याप्सिकम), काँक्रा र गुलाबको लागि अत्यन्त उपयुक्त छ। तपाईं विस्तारित माटो गोली, पर्लाइट, र नरिवल कोइर सहित बढ्दो मिडिया को कुनै पनि प्रकार को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। डच बाल्टियाँ ड्रिप सिंचाई प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त छन्। ओभरफ्लो आउटलेट एक केन्द्रिय १-११ / २-PVC ड्रेन पाइपमा जडान गर्न सकिन्छ। बाल्टिनको अत्यन्त प्रभावकारी आन्तरिक डिस्चार्ज प्रणाली छ। दुई कुहिनाहरू स्थापना गरेर, ओभरफ्लो पानी बाल्टिनको तल्लो तहबाट चुसिन्छ र केन्द्रीय ड्रेन पाइपमा डिस्चार्ज हुन्छ। यसले स्थिर पानीको पोखरी हटाउनेछ। डच बकेटले १२-इन x १०-in x--in (LxWxH) मापन गर्छ। डच बाल्टिनहरू खाना-ग्रेडको पोलिप्रोपाइलिनबाट बनेका छन्। निम्नलिखित डमथ बाल्टिन सबस्ट्रेट हाइड्रोपोनिक्स टमाटर, काकडी तरकारीको बारेमा छ।
नेदरल्यान्ड बाल्टिन (बाटो बालकेट पनि भनिन्छ) एक कुशल ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो र ठूलो, दीर्घकालिक बालीहरू जस्तै बेल टमाटर, खुर्सानी (क्याप्सिकम), काँक्रा र गुलाबको लागि अत्यन्त उपयुक्त छ। तपाईं विस्तारित माटो गोली, पर्लाइट, र नरिवल कोइर सहित बढ्दो मिडिया को कुनै पनि प्रकार को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
डच बाल्टियाँ ड्रिप सिंचाई प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त छन्। ओभरफ्लो आउटलेट एक केन्द्रिय १-११ / २-PVC ड्रेन पाइपमा जडान गर्न सकिन्छ। बाल्टिनको अत्यन्त प्रभावकारी आन्तरिक डिस्चार्ज प्रणाली छ। दुई कुहिनाहरू स्थापना गरेर, ओभरफ्लो पानी बाल्टिनको तल्लो तहबाट चुसिन्छ र केन्द्रीय ड्रेन पाइपमा डिस्चार्ज हुन्छ। यसले स्थिर पानीको पोखरी हटाउनेछ। डच बकेटले १२-इन x १०-in x--in (LxWxH) मापन गर्छ। डच बाल्टिनहरू फूड-ग्रेड पोलिप्रोपाइलिनबाट बनेका हुन्छन्।
जलविद्युत बाटो बुकिट्सका लागि रोप्ने भाँडाहरू डच बक्सहरू
MAXPOWER हाइड्रोपोनिक डच बाल्टिन पनि bato बाल्टिन को रूप मा चिनिन्छ एक कुशल ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो र हाइड्रोपोनिक बढ्दो प्रणाली जस्तै बेल्ट tomatos, काली मिर्च (क्याप्सिकम), काक्रा र यहाँसम्म गुलाब को लागी धेरै उपयुक्त छ।
तपाईं बढेको माटो की गोली, पर्लाइट, र नरिवल कुइरो सहित बढ्दो मिडियाको कुनै पनि प्रकारको बारेमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ; पनि scallions, तुलसी, अन्य जडिबुटी र अधिकको लागि आदर्श!
डच बकेट आकार: *० * २ * * २cm सेमी (L * WH *) / १२ * १० * in इन, ११ एल
केवल तपाईको बाल्टिन र सिफन कुहिनो (समावेश गरिएको) मानक १-१ १ / २ ईन्च (8.8 सेमी) नाली पाइपमा जडान गर्नुहोस्, तपाईंको पानी पुनः भण्डारमा फर्केर ड्रिप प्रणालीको माध्यमबाट पुनः recirculate गर्न।
१) आकार: cm० सेमी X २cm सेमी x २cm सेमी
२) फूड ग्रेड पीपीबाट बनेको छ
)) अत्यधिक कुशल
हाइड्रोपोनिक्स डच बाल्टिनहरू
१२ "x १०" x "" (cm० सेमी x २cm सेमी x २cm सेमी)
फूड-ग्रेड पीपी र यूवी
बेज वा कालो
२ सिफन कुहिनाहरू समावेश छन्
१-१ / २ ईन्च
Cm० सेमी x cm१ सेमी x 52२ सेमी
डच बाल्टिनहरू ड्रिप इमिटरहरूले खुवाउन डिजाइन गरिएको हो र स्थानीय १ purchased. 1.5 "पीभीसी पाइप प्रयोग गरेर निकासको लागि प्ल्याम्ब्ब गरिएको छ।
सिफन कुहिनोले बाल्टिनको तल पोषण समाधानको सुरक्षा भण्डार १ "गहिराइमा नियन्त्रण गर्दछ। यस सुविधाले बढ्दो मध्यमलाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ र सिँचाइ चक्रको बीचमा पानीको तनाव पैदा गर्दछ। साइफन पाइपले पोषक समाधानको स over्ग्रहण गर्नबाट पनि जोगाउँदछ। प्रत्येक साइफन कुहिने प्रत्येकलाई सिफारिस गरिन्छ। बाल्टिन
तपाईं विस्तारित माटो गोली, पर्लाइट, र नरिवल कोइर सहित बढ्दो मिडिया को कुनै पनि प्रकार को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
टमाटर, काकडी, खुर्सानी, स्केलियन्स, तुलसी, अन्य जडिबुटी र अधिकको लागि आदर्श!
डच बाल्टे ज्वारभावी सिंचाइमा आधारित पिलमा बगैंचामा प्रयोग गरिन्छ, जुन तरल उत्सर्जन पाइप र डच पायल समावेश भएको एकीकृत प्रणाली हो। यस मोडेलको सब भन्दा प्रस्ट फाइदा भनेको केन्द्रीय पानी उत्सर्जन प्रणाली सुरक्षित पोषण तरल पदार्थको उत्तम सुरक्षा उचाइ हो। योसँग कुनै "अवरोध, पानीको कमी वा स्थिर पानी" हुनेछैन जसले ओभर पोषक तरल पदार्थ वा पानीको अभावको समस्याबाट बच्न सक्छ। प्रणालीले सबै आवश्यक र पानी र बालीहरूका लागि पोषण सन्तुलित आपूर्ति गर्नेछ।
डच बाल्टिनले तपाइँको आवश्यकता अनुसार एकल वा बहु-प्वालको साथ रोपण योजना आपूर्ति गर्न सक्छ, र यो सारिन वा कुनै पनि समयमा आराम गर्न सक्दछ।डच बाल्टिनलाई विश्वव्यापी आधुनिक पानी खेती फार्ममा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ जसले उत्पादक दक्षता र खाद्य सुरक्षा सुधार गर्दछ।
वितरण समय: --7 दिन
उत्पादन: २ सिफन कुहिनो भएको डच बाल्टिन
प्याकेजि:: units० एकाई / दफ़्ती (कार्टन आयाम: १2२ x .5१. x x २.5..5 सेमी)
२० जीपी लोड: 0000०० एकाई
GP० जीपी लोड: १200२०० एकाई
40HQ लोड: १000००० एकाइ
तरकारीका लागि फ्लोटिंग प्यानल NFT हाइड्रोपोनिक प्रणालीजिन्डा ग्रीनहाउस कम्पनीबाट हाम्रो कारखानामा भ्रमण र कुनै पनि छानबिनको लागि स्वागत छ।
हट ट्याग: टमाटर, काकडी सब्जी, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, थोक, खरीद, ब्रांड, गुण, कम मूल्य, छूट, अनुकूलित, सस्तो, चीनमा बनेको, मूल्य सूची, उद्धरण, सीई, १ 15 वर्ष वारंटी